Nagarik News - इन्द्रेको बाउ
आइतबार ६ श्रावण, २०७०
बाटोको हिलो नाप्दै चालक चन्द्र। तस्विरः भीम चपागाईं
अप्ठ्यारो काम गर्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, तर अप्ठ्यारा काम गर्दा हाँस्न र हँसाउन सक्ने थोरैमात्र हुन्छन् ।
इन्द्रेको बाउ दिनभर हाँसिरह्यो, हामीलाई पनि हँसाइरह्यो ।
तर हामी कुनै हाँसोलाग्दो काममा थिएनौं । दुई महिनादेखिको झरीले गलाएको माटोमा बनेको कच्ची पहाडी बाटोमा घन्टाको आठ किलोमिटरका दरले घस्रिनु त्यति रमाइलो काम होइन । गाडी ठाउँ–ठाउँमा अड्किन्छ, फँस्छ, अनि चक्कामात्र फनफनी घुम्न थाल्छ । उकालोमा पछाडिबाट ठेल्दा पछाडि नै सर्ने डर सधैं हुन्छ । त्यसो नभए पनि चक्काले छ्याप्ने हिलोका लागि तयार त हुनै पर्छ । कहिलेकाहीँ गाडी कोल्टिएर एकातिरको ढोकै नखुल्ने अवस्था आइपुग्छ । पर्मेजुङको एउटा ओरालोमा त मुटु कक्रिएर लालगेडी जत्रो भयो, हिलो माटोलाई समाउन नसकेका चक्काको गति र दिशालाई नियन्त्रणमा लिन इन्द्रेको बाउसित निकै कममात्र समय उपलब्ध थियो । उसका हातको त्यो छोटो समयमा १२ जनाको जीवनको बाँकी भाग निहित थियो । चिप्लिँदै गरेको गाडीलाई बायाँतिर मोड्नमा निमेषभरको मात्र ढिलाइ भएको भए ऊ, उसका बारेमा लेख्न मन गर्ने यो लेखक, उसका फोटा खिच्ने फोटोग्राफरलगायत कोही पनि बाँकी रहने थिएनन् ।
हाम्रा लागि त एक दिनको यात्रामात्र हो । उसको त पेसा नै यस्तो छ, जहाँ अलिकति तलबितल प¥यो भने 'जीप एक सय ५० मिटर तल' भन्ने समाचारमा सजिलै नाम आउन सक्छ ।
तर पनि इन्द्रेको बाउ हाँस्छ, थोरै बोल्छ तर बोलेपिच्छे हसाउँछ । गाडी निकै नराम्ररी फँस्यो भने खल्तीको महँगो मोबाइल निकालेर फोटा खिच्न पनि भ्याउँछ ।
'इन्द्रेको बाउ' मे अ १ ज ४६३ का चालक चन्द्र मुखियालाई हामीले दिएको पगरी । 'इन्द्रेको बाउ चन्द्रे'ले पनि नसक्ने काम पार लाउने व्यक्तिको नाम संयोगले चन्द्र नै परेछ । एउटा उकालोमा निकैबेर अड्किएर गाडी उक्सिएपछि कसैका मुखबाट फ्याट्ट निस्कियो, 'ल है पार लायो इन्द्रेको बाउले !'
पहिलोपटक भेटेको मान्छेका नाममा सिधै नभए पनि एकार लगाइएको थियो, चन्द्रलाई 'चन्द्रे' भनिएको थियो । गोली जसरी नै बोली छुटिसकेको थियो । तर उनले त्यसभित्रको परिहास बुझिदिए । कसैले जोक बुझेन भने न बिजोक हुने हो ! अगाडि–पछाडि, दायाँ–बायाँ र तल–माथि हल्लिएर बेहाल भएका यात्रीसितै उनी पनि मजाले हाँसे । अनि त दिनभर उनी इन्द्रेको बाउ नै भए ।
उनले हामीलाई इलामको फिक्कलबाट मकरजुङ, पर्मेजुङ, नयाँबजार हुँदै सोयाङको सिरान, स्यालढुंगासम्म पु¥याएर फर्काउने जिम्मेवारी लिएका थिए । हामीले १० किलोमिटर बाटोबाट जोगमाई खोलादेखि नयाँबजारसम्मको करिब एक हजार मिटरको उचाइ चढ्नुपथ्र्यो । त्यो उकालो सरदरमा १० प्रतिशतको मात्र भए पनि एकैनासको थिएन । त्यसैले गाडी जति तेर्सो हिँड्न पाउँथ्यो, भरे आउने उकालो सम्झेर हामीलाई त्यति नै डर लाग्थ्यो । उकालो चढ्दा बाटो ढिलो र अप्ठ्यारो थियो, फर्किंदा त्यही बाटो अलि छिटो तर निकै डरलाग्दो भयो ।
चालक चन्द्र मुखियाको प्रोफेसनालिजमले हामीलाई साँच्चै प्रभावित पा¥यो । उनको अनुहारमा थकान, दिक्क, डर, झर्कोफर्को केही देखिएन । लगभग १० घन्टाको सहयात्रामा उनले 'सडक शब्दावली'बाट एउटा पनि शब्द साभार गरेको सुनिएन ।
कोही अप्ठ्यारा काम रहरले गर्छन् र एडभेन्चरको मजा लिन्छन् । कोही तिनै काम करले, 'कर्मै यस्तो' भन्दै गर्छन् । चन्द्र मुखिया सम्भवतः यी दुवै कोटीमा पर्दैनन् । उनी आफूखुसी यस्तो
'अफ रोडिङ'को मजा लिने पुगिसरी आएका व्यक्ति होइनन् । तर उनी यसलाई बाध्यता पनि मान्दैनन् । ड्राइभिङ उनलाई महिनाको टाकन टुकन १०­ १२ हजार जति रुपैयाँ दिने जागिर हो । उनले बीएको पढाइ नसकिँदै २० वर्षको उमेरदेखि समातेको 'गाडी लाइन' उनका लागि पेटपालोको मेलो हो । त्यही काम उनी दत्तचित्त भएर गर्छन्, त्यही मन पराउँछन् । उनलाई गाडीमा चढ्ने थरीथरीका मान्छेका कारण आफ्नो जीवनमा पनि रङ थपिएझैं लाग्छ रे ! लाग्छ, कुनै पनि 'प्रोडक्ट'मा मुस्कानको 'स्टिकर' टाँस्न सकियो भने त्यसले राम्रो मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने पनि उनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
चन्द्रलाई हामीले दिनभर 'इन्द्रेको बाउ' भने पनि उनका घरमा १० महिनाअघि जन्मिएको भुकुमुने सानु मुखियाको नाम भने इन्द्र होइन । चन्द्र र मुना मुखियाको मायाको निशानी फुच्चेको नाम पनि निशान नै हो । ऊ बाबुको बाटो हेर्ने भएको छैन । चन्द्रलाई नै कतिबेला घर पुगूँ र फुच्चेलाई खेलाऊँ जस्तो भइरहेको हुन्छ । पारिवारिक उत्तरदायित्वले यी २४ वर्षे युवकलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । उनको गम्भीरताले धेरैलाई सुरक्षित बनाएको छ ।
मान्छेलाई गाडी चल्ने ठाउँमा हिँड्न मन लाग्दैन । गाडी चलेका बाटामा पनि मान्छे रमाइलो मानेर हिँड्ने भए पदयात्रा पर्यटनको थालनीका लागि विश्वलाई नेपाल चाहिने थिएन । इलाममा पनि अब मान्छे हिँडेर कहीँ पनि जान रुचाउँदैनन् । जिल्लाभरिमा करिब दुई हजार किलोमिटर बाटो छ, जसमा करिब सवासय किलोमिटर पक्की होला । बाँकी कतै अलिअलि प्राविधिक सेवासहितका कतै गोलियाका ठेकेदारले जबरजस्ती बनाएका बाटाहरू छन् । चन्द्र मुखियामात्र होइन, अरू धेरै इन्द्रेका बाउहरू यिनै बाटामा काठ, चिया, दूध, अदुवा, बाँस, गाई, बाछा र मान्छे बोकिरहेका हुन्छन् ।
गोडाले हिँड्ने गोरेटा, घोडा हिँड्ने घोडेटा हुन्छन् भने जीपमात्र हिँड्ने बाटालाई 'जिपेटा' भने के हुन्छ ? आखिर 'जीप' पनि त गाडीको ब्राण्डबाट अर्थ विस्तार भएर एसयुभीको नेपाली नाम भइसक्यो नि ! मरुभूमिमा गरिने डेजर्ट सफारीजस्तो हाम्रा पहाडहरूमा 'जिपेटा सफारी' को नयाँ पेसा थाले के हुन्छ ?
चन्द्र मुखियाले कुदाउने ४६३ को मात्र होइन, यस भेकका धेरै गाडीको कुनै थर–जात बाँकी छैन । गाडीको बडी, चेसिस र इन्जिन फेर्न पाइँदैन भन्ने कानुनका दृष्टिबाट हेर्दा यहाँका धेरै गाडी कानुनविपरीत छन् । उहिले सतखुइलेका ल्यान्डरोभर गाडीमा बडी र चेसिसमात्र ल्यान्डरोभरका छन्, तीमध्ये धेरैमा महिन्द्राका डाइरेक्ट इन्जेक्टिङ इन्जिन लगाइएका छन् । त्यसैले निर्माण र उपयोगिता दुवै हिसाबले यिनलाई खच्चर गाडी भने हुन्छ । यी नियमविपरीत छन्, तर मेची अञ्चलको पहाडी भेकको कृषि अर्थतन्त्र यी खच्चर गाडीहरूमा नै निर्भर छ । त्यस्तै उस्तै पर्दा जिल्लाका हाकिमसाबहरू समेत यिनै 'एसयुभी' नचढी धर पाउँदैनन् । हाम्रा इन्द्रेका बाउहरूले कुदाउने यी गाडीमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारबाट पनि इन्द्रेको बाउ नै आउनुपर्छ ।
राम्ररी कुदिरहेका यी खच्चर गाडीलाई अवैध भनिराख्नुभन्दा वैधता दिएर र 'जिपेटा सफारी' सुरु गरेर पर्यटनमा एकैपटक दुईवटा खुट्किला थप्ने हो कि ? बरु सजिलो त यो पो हुने देखिन्छ !
धर्मसँग राजनीतिको फेरो
भारतमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणयता 'के भारत हिन्दु साम्प्रदायिक शक्तिहरूबाट परिचालित होला त?' भन्ने त्रास त्यहाँको एउटा वर्गमा देखिन्छ। यता नेपालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केही नेताले...
हनुमान नाचमा रमाउँदै
बागलुङको न्यु एभरेस्ट एकेडेमी कक्षा आठका विद्यार्थी अभिषेक पौडेल ‰याली बजाउँदै थिए। आर्जन ओझा मृदुंगा (ढोलकी) ठोक्दै थिए। अभिषेक र आर्जनले पनि तालमा ताल मिलाएर बाजा बजाए।
पालमुनि घाइते बिरामी सुतेका छन् । प्रायजसोको खुट्टा र हातमा सेतो प्लास्टर, स्टिलको रड लगाइएको छ । सेतो पोसाकमा रहेका चिकित्सक हातखुट्टा भाँचिएका बिरामीको उपचारमा तल्लीन छन् । भुइँचालोमा घाइते...
घर त मेरो चिमखोला
हामी नयाँ पदमार्ग 'धौलागिरि सेन्चुरी टे्रल'को अध्ययन भ्रमण सकेर बेनी बजारमा बसेका थियौं। लोकदोहोरी गायिकालाई भेट्ने योजना बाँकी थियो। त्यसैले साँझ मित्र घनश्याम खड्का, शुरेन्द्र राना र म उनको घरमा...
'युग' धानेका दम्पती
गौरीघाटस्थित घरमा ९४ वर्षीय गोविन्दकुमार रिमाल भुइँखाटमा बसिरहेका छन्। दोलाइँमा गुटमुटिएर बसेका। दसैंको फूलपातीका दिन बाथरुममा लडेर उनको दाहिने हात भाँचिएको छ। बाथरुममा उनी कसरी लडे? उनैलाई पत्तो छैन। घटनाबारे...
त्रिशूलीमा एडभेन्चर ककटेल
धादिङ, चरौंदीमा तीतेकरेला बारीलाई दायाँबायाँ पारेर त्रिशूली किनारतिर लम्किँदा मन डराइरहेको थियो— छालले हुत्याएर नारायणीमा मिसायो भने! परिवार, इष्टमित्र, शुभेच्छुक, भविष्य, जिम्मेवारी एकैपटक आँखासामु सल्बलाए। २०७० असार १ गते पौडी...
हामी तयार छौं ?
सिन्धुपाल्चोकको माङखा जुरेमा गत शनिवार गएको पहिरोले सुनकोसी नदीको बहाव नै रोकिदिएको छ। यति ठूलो प्रकृतिक विपत्तिका घाइतेको उद्धारपछि उपचारमा उचित समन्वय नहुँदा घाइते र तिनका आफन्तले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको...
मैले डिप्रेसनको औषधि खान थालेको तीन वर्षजति भएको थियो। डाक्टर भन्थ्यो- तनाव यसरी नै बढाउँदै जाने हो भने औषधिको डोज बढाउनुपर्छ।'कति पटकसम्म बढाउन सकिन्छ डोज?' मैले एक दिन डाक्टरलाई सोधेको...